China Plastic Slab Formwork ifektri nabahlinzeki |I-Lianggong
I-Lianggong Plastic Slab Formwork iwuhlelo olusha lwezinto ezibonakalayo olwenziwe nge-ABS nengilazi yefayibha.Ihlinzeka ngezindawo zephrojekthi ngokumiswa okulula ngamaphaneli esisindo esincane ngakho kulula kakhulu ukukuphatha.Kuphinde konga izindleko zakho kakhulu uma uqhathanisa nezinye izinhlelo ze-formwork material.
I-formwork yepulasitiki ifanele ukuqaphela amakholomu kakhonkolo, izinsika, izindonga, amapulangwe kanye nezisekelo ngqo endaweni.Amasistimu ahlanganisiwe kanye ne-modular of formwork yepulasitiki engasetshenziswa kabusha asetshenziselwa ukwakha izakhiwo eziguquguqukayo ezibanzi, kodwa ezilula, ezikhonkolo.Amapaneli alula futhi aqinile kakhulu.Zifanele ikakhulukazi amaphrojekthi ezakhiwo ezifanayo kanye nezinhlelo zezindlu ezingabizi kakhulu, ezinkulu.I-modularity yabo yanelisa zonke izidingo zokwakha nokuhlela: amakholomu nezinsika zomumo nobukhulu obuhlukene, izindonga nezisekelo zokujiya nobude obuhlukene.
I-formwork yepulasitiki ilula kakhulu uma iqhathaniswa namaphaneli okhuni endabuko.Ngaphezu kwalokho, izinto zepulasitiki ezenziwe ngazo zivumela ukhonkolo ukuthi unganamatheli: yonke into ingahlanzwa kalula nje ngamanzi amancane.
1. I-modular futhi iguquguqukayo esizeni.
2. Izibambo ezinelungelo lobunikazi ezinayiloni zokukhiya okuhle kakhulu kwamaphaneli.
3. Ukuqaqa kalula kanye nokuhlanza ngokushesha ngamanzi.
4. Ukumelana okuphezulu (60 kn/m2) nobude bamaphaneli.
Isikwe ngokukhululekile futhi iyalungiseka ngamandla amakhulu okubamba izinzipho.Kungenziwa ngendlela oyifisayo ngokususelwe kubukhulu, ubukhulu, nendawo ethile.Ukwakheka ngendlela oyifisayo, njengokugoqa, ukugoqa.
Ukuhamba kalula njengokuminyana kwehliswe ngo-50% uma kuqhathaniswa nesakhiwo sokhuni.
Indawo eyinhlanganisela engangeni manzi igwema ngokuphelele izinkinga ezibangelwaimvelo enomswakama, njengokukhuphuka kwesisindo, i-warping, i-deformation, ukugqwala nokunye.
Inzuzo ifika ezikhathini ezingu-X uma iqhathaniswa neningi lezakhiwo zepulasitiki, ezinokumelana nezinga lokushisa eliphezulu kanye nempahla yemishini ebanzi kakhulu.
Iphephile futhi ivumelana nemvelo inqubo yepulasitiki eyengeziwe ihlangabezana nezindinganiso zamazwe ngamazwe.
Indawo ekwazi ukumelana nosimende kulula ukuyihlanza.Ukubonakala kodonga olomile olunobuso obushelelezi nokubonakala okuhle.
Ukuhlola Iyunithi Idatha Okujwayelekile
Ukumuncwa kwamanzi % 0.009 I-JG/T 418
Ukuqina kogu H 77 I-JG/T 418
Amandla okuthinta KJ/㎡ 26-40 I-JG/T 418
Amandla e-Flexural I-MPa ≥100 I-JG/T 418
I-Elastic module I-MPa ≥4950 I-JG/T 418
Ukuthambisa i-Vicat ℃ 168 I-JG/T 418
I-flame retardant ≥E I-JG/T 418
Ukuminyana kg/㎡ ≈15 ----
Okwedlule: Insimbi Prop
Olandelayo: Ngokwezifiso Steel Formwork